Ugubhe Iminyala Yokuzalwa ona 103 – eHowzit
Ugubhe Iminyala Yokuzalwa ona 103
KWEHLE izinyembezi zenjabulo kumzukulu kagogo oneminyaka engama-103 ngesikhathi umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi Kanye nomasipala woGu wenze umcimbi wokubungaza lesi salukazi ezinkundleni zemidlalo I uGu Sport and leisure zingama-26 kuyo lenyanga.
Ugogo Nomhlola MaShusha Mbali waseGamalakhe endaweni yasesi Gedleni wenzelwe lomcimbi ngesikhathi kuvulwa imidlalo yabadala yesifundazwe ama Golden Games nokuhlangene kuwo izifunda eziyi-11 ukuzoqhudelana emidlalweni enhlobonhlobo.
Umzukulu uNksz Thabisile Mbali uthe injabulo imeqe kakhulu njengalokhu ethi konke lokhu kufana nephupho kubona bengumdeni ngoba isimo sasekhaya singabavumeli ukuba bajabulise ugogo wabo.
Ngokusho kaWeziwe Thusi ongungqongqoshe walomnyango uthe umnyango wakhe uvakashele lomdeni, nalapho ufike khona wabona isimo ophila ngaphansi kwaso sabantu abangy-8 , okuthiwa uhlala endlini enamakamelo amathathu.
“Sizomakhela-ke ugogo indlu yakhe ukuze ahlale anethezeke, ngoba akumele angayiboni imisebenzi yalenkululeko , aphinde avune ekuhlonipheni abazali bakhe Kanye nasekuziphatheni kahle, ngoba phela izona izivuno lezi esizibonayo namhlanje” kusho u Thusi
Ungqongqoshe uphinde wabonga igalelo lika Rev Mgojo owayengusihlalo we Senior Citizen Association ngomsebenzi omuhle awenza wabe esethula usihlalo omusha.